Marmaray Ücretleri Gidilen İstasyon Sayısına Göre Değişiyor – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKhidmadaha Marmaray Isbeddelka Lambarka Xarumihii La Socday
Qiimaha tikidhada marmaray way kala duwan yihiin marka loo eego tirada saldhigyada la booqday
Kharashaadka Marmaray waxay ku kala duwan yihiin tirada saldhigyada la booqday; Nidaamka qiimaynta ee Marmaray, oo bilaabay inuu ku adeego wadarta joogsiga 43 bilihii la soo dhaafay, wuu ku kala duwan yahay tirada joogsiga.
5.5 Marmaray, oo bixisa adeeg wadarta guud ee joogsiyada 5 sanadka oo dhan, waxay kordhisay tiradeeda joogsiyada illaa 43 bilihii dhawaa. Qiimaha Marmaray wuxuu ku kala duwan yahay 2.60 TL iyo 5.70 TL, halka sicirka uu ku kala duwan yahay iyadoo loo eegayo masaafada ay muwaadiniintu u safrayaan.
Madaxweynaha TÜDER Levent Küçük wuxuu bayaan uu siiyay xubnaha saxaafada kaga hadlay arinta wuxuuna khudbad ka jeediyay shacabka. Küçük wuxuu sheegay in Marmaray ay u fududeynayso gaadiidku dadka ku nool magaalada isla markaana ay tixgelin badan ka heshay ballaarinta shabakadda gaadiidka.
Khidmadaha Marmaray Isbeddelka Lambarka Saldhigyada
Küçük wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasada sicir bararka Marmaray uu kordhay saamiga tooska ah ee saldhiga la isticmaalay, iyo 1 TL ee 7 ilaa 2.60 istaag, 8 TL ee 14 istaag, 3.25 TL for 15 iyo 21 istaagida 4.40 joogsi. TL, 29 ia 35 stall adeegsiga isticmaalka dacwaddu waa 5.20 TL, 36 to 43 stall use waa dacwaddii lagu helay 5.70 TL.
Qaab dhismeedka qaanuunka qiimaha ee Marmaray, masaafada ugu yar ayaa loo qaataa safarka joogsiga, yar, xaaladdan waxaa u sabab ah suurtagalnimada in loo aado halka ugu fog ilaa saldhigyadu ka baxaan. Muwaadiniintu ma tagayaan masaafada fog ee meelaha looga baxo soo celinta aaladaha u baahan in ay akhriyaan kaararka yar, iyagoo ka hadlaya dhamaadka masaafada ay u safreen aaladaha ay ku soo laabteen aaladda ayaa sheegay in lacag badan.
Mid la mid ah siyaasadaha qiimeynta, oo tilmaamaya in shaqeynta shirkadda 'Metrobus' ay yar tahay, inta badan xaaladdan, oo leh in macluumaadka muwaaddiniinta, ay uga digayaan muwaadiniinta arrintan.
Sharraxaad kale waxaa sameeyey Madaxweynaha TÜDEF Aziz Koçak. Koçal wuxuu qoraal ku sheegay in muwaadiniintu inta badan ilaaween inay qaataan dib-u-celinta, wuxuu xusay inay jiraan astaamo digniin ah oo qoraal ah oo ku saabsan magdhowga meelaha laga soo galo ee joogsiga Marmaray. (Kamubült ah)
Tirada Saldhigyada Bursarayda Dib u Celinta
Marmaray Khidmooyinka laga Sameeyay TCDD
Mashruuca Teleferic Kastamonu wuxuu bedelayaa Goobta
Goobta mashruuca garab-wadareed ee loogu talagalay Kastamonu ayaa isbeddelaysa
Dhibaatooyinka Gawaarida ee Kuluda ayaa Isbedelaya
Tirada Marmaray joogsato